Myanmar Executive Search (Top Recruitment Burma) FAQ - MyWorld
MyWorld Careers Company အကြောင်းအမေးများတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။
(Zaw Gyi Version)​
စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တွေ့ရင် ကိုယ့် CV ကို support@myworld.com.mm သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Facebook post မှ Direct Link ကနေ MyWorld Website ကိုသွားပြီး တိုက်ရိုက်လျှောက်လို့လည်း ရပါတယ်။ တခြား Information လေးသိချင်ရင်တော့ ရုံးဖုန်းနံပါတ် 094-5021-4921 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၂။ Candidate များက MyWorld ကို Service ကြေးပေးရမှာလား။ MyWorld Careers မှာတင်ထားတဲ့ အလုပ်တွေကိုလျှောက်ရင် ပိုက်ဆံပေးစရာလိုလား?
Candidate ဘက်က Service ကြေး ပိုက်ဆံ ပေးစရာလုံးဝမလိုပါ။ MyWorld Careers မှာတင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကို အခမဲ့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
၃။ MyWorld က CV တွေကို Confidential ထားပေးမှာလား။
Candidate တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို အလေးထားသောကြောင့် CV ကို Confidential ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှင့်သင့်တော်မယ့်အလုပ် Position တွေ့ရင် MyWorld မှ Consultant တွေက သင့်ကိုဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်.. သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Job Vacancy ခေါ်နေတဲ့ တစ်ဘက်ကုမ္ပဏီကို သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလျှင် သင့် CV ကို ပို့ပေးပါတယ်။
၄။ သင်က MyWorld ကို CV ပို့လိုက်ထားပြီးပြီ... ဒါပေမယ့် ဘာမှ Reply လည်း ပြန်မကြားရတာ ဘာကြောင့်လဲ။
MyWorld ကို တစ်နေ့တစ်နေ့ဝင်လာတဲ့ Application တွေက ရာနဲ့ချီပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် MyWorld ဘက်ကလည်း သက်ဆိုင်ရာ Position နဲ့ သင့်တော်မယ့် Candidate တွေကိုသာ Reply ပြန်နိုင်တဲ့အတွက် နားလည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အသစ်တွေကို MyWorld Careers Facebook Page, LinkedIn Page နှင့် Website တို့မှာအမြဲတင်ပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ့ရင်လည်း ထပ်မံလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ဖြေရှင်းချက်ကိုဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကို Click နှိပ်ပါ။
၅။ MyWorld Careers မှာတင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘယ်အလုပ်ကိုလျှောက်ရမှန်းမသိလို့ အကြံပေးပါလား?
အခုလို Feedback လေးတွေ ပြန်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Career နဲ့အဆင်ပြေဆုံး အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ Career Advice အကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါက MyWorld Careers ရုံးဖုန်းဖြစ်တဲ့ 094 5021 4921 ကိုဆက်သွယ်ပြီး MyWorld Consultant တွေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ တခြားအလားတူအလုပ်အကိုင်တွေကို www.myworld.com.mm မှာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့များ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် အလုပ်အကိုင်ရှာမတွေ့သေးရင် MyWorld Website မှာ Register လုပ်ပါ.. ဒါမှမဟုတ် သင့် CV ကို support@myworld.com.mm ကို Email ပို့ပြီး တိုက်ရိုက်အလုပ်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ MyWorld မှ Consultant တွေက သင်နှင့်သင့်တော်မယ့်အလုပ်အကိုင်ကိုတွေ့တိုင်း သင့်ကိုဆက်သွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
၆။ Candidate တွေကို တစ်ဘက်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောပြနိုင်မလား။
ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ တစ်ဘက်ကုမ္ပဏီအကြောင်း Confidential ထားပေးရတဲ့အတွက် ပြောပြပေးလို့မရပါဘူး။ သင့် CV ကိုကြည့်ပြီး သင်နှင့်သင့်တော်မယ့်အလုပ်အကိုင်တွေ့တယ်ဆိုရင် MyWorld က သင်နဲ့အလုပ်အကိုင်အကြောင်း ဆွေးနွေးရန်ဆက်သွယ်ပါတယ်။ ထိုအခါ သင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုမှသာ ကုမ္ပဏီအမည်တွေကိုပြောပြပါတယ်။
၇။ သင့်ကုမ္ပဏီက Job Vacancy အတွက်ရော ကြော်ငြာပေးလား။
ဟုတ်ကဲ့ ကြော်ငြာပေးပါတယ်။ Client တွေကိုအကောင်းဆုံး Quality Recruitment Service ကိုပေးတဲ့ MyWorld Careers Company ကိုဆက်သွယ်လိုပါက MyWorld ရုံးဖုန်း 094-5021-4921 နှင့် Email လိပ်စာ sales@myworld.com.mm သို့ရုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
စိတျဝငျစားတဲ့အလုပျတှရေ့ငျ ကိုယျ့ CV ကို support@myworld.com.mm သို့ပေးပို့လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။ Facebook post မှ Direct Link ကနေ MyWorld Website ကိုသှားပွီး တိုကျရိုကျလြှောကျလို့လညျး ရပါတယျ။ တခွား information လေးသိခငျြရငျတော့ ရုံးဖုနျးနံပါတျ 094-5021-4921 သို့ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
၂။ Candidate မြားက MyWorld ကို Service ကွေးပေးရမှာလား။ MyWorld Careers မှာတငျထားတဲ့ အလုပျတှကေိုလြှောကျရငျ ပိုကျဆံပေးစရာလိုလား?
Candidate ဘကျက Service ကွေး ပိုကျဆံ ပေးစရာလုံးဝမလိုပါ။ MyWorld Careers မှာတငျထားတဲ့အလုပျတှကေို အခမဲ့လြှောကျထားနိုငျပါတယျရှငျ့။
၃။ MyWorld က CV တှကေို Confidential ထားပေးမှာလား။
Candidate တှရေဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာကို အလေးထားသောကွောငျ့ CV ကို Confidential ထားပေးမှာဖွဈပါတယျ။ သငျနှငျ့သငျ့တျောမယျ့အလုပျ Position တှရေ့ငျ MyWorld မှ Consultant တှကေ သငျ့ကိုဆကျသှယျမှာဖွဈပါတယျ.. သငျစိတျဝငျစားတဲ့ Job Vacancy ချေါနတေဲ့ တဈဘကျကုမ်ပဏီကို သငျ့ရဲ့ခှငျ့ပွုခကျြရမှသာလြှငျ သငျ့ CV ကို ပို့ပေးပါတယျ။
၄။ သငျက MyWorld ကို CV ပို့လိုကျထားပွီးပွီ... ဒါပမေယျ့ ဘာမှ Reply လညျး ပွနျမကွားရတာ ဘာကွောငျ့လဲ။
MyWorld ကို တဈနတေ့ဈနဝေ့ငျလာတဲ့ Application တှကေ ရာနဲ့ခြီပါတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့ MyWorld ဘကျကလညျး သကျဆိုငျရာ Position နဲ့ သငျ့တျောမယျ့ Candidate တှကေိုသာ Reply ပွနျနိုငျတဲ့အတှကျ နားလညျပေးဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ။ အလုပျအကိုငျအသဈတှကေို MyWorld Careers Facebook Page, LinkedIn Page နှငျ့ Website တို့မှာအမွဲတငျပေးထားတဲ့အတှကျ ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့အလုပျတှရေ့ငျလညျး ထပျမံလြှောကျထားနိုငျပါတယျရှငျ့။ ဒီမေးခှနျးနဲ့ပတျသကျပွီး အသေးစိတျဖွရှေငျးခကျြကိုဖတျရှုရနျ ဤနရောကို Click နှိပျပါ။
၅။ MyWorld Careers မှာတငျထားတဲ့အလုပျတှကေို စိတျဝငျစားတယျ။ ဘယျအလုပျကိုလြှောကျရမှနျးမသိလို့ အကွံပေးပါလား?
အခုလို Feedback လေးတှေ ပွနျပေးလို့ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ Career နဲ့အဆငျပွဆေုံး အကိုကျညီဆုံးဖွဈတဲ့ အလုပျအကိုငျနဲ့ Career Advice အကွောငျးဆှေးနှေးလိုပါက MyWorld Careers ရုံးဖုနျးဖွဈတဲ့ 094 5021 4921 ကိုဆကျသှယျပွီး MyWorld Consultant တှနေဲ့ဆှေးနှေးနိုငျပါတယျရှငျ့... တခွားအလားတူအလုပျအကိုငျတှကေို www.myworld.com.mm မှာရှာဖှနေိုငျပါတယျ။ တဈကယျလို့မြား ကိုယျနဲ့သငျ့တျောမယျ့ အလုပျအကိုငျရှာမတှသေ့ေးရငျ MyWorld Website မှာ Register လုပျပါ.. ဒါမှမဟုတျ သငျ့ CV ကို support@myworld.com.mm ကို Email ပို့ပွီး တိုကျရိုကျအလုပျလြှောကျထားလို့ရပါတယျ။ MyWorld မှ Consultant တှကေ သငျနှငျ့သငျ့တျောမယျ့အလုပျအကိုငျကိုတှတေို့ငျး သငျ့ကိုဆကျသှယျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျရှငျ။
၆။ Candidate တှကေို တဈဘကျကုမ်ပဏီအကွောငျးပွောပွနိုငျမလား။
ဝမျးနညျးစှာနဲ့ပဲ တဈဘကျကုမ်ပဏီအကွောငျး Confidential ထားပေးရတဲ့အတှကျ ပွောပွပေးလို့မရပါဘူး။ သငျ့ CV ကိုကွညျ့ပွီး သငျနှငျ့သငျ့တျောမယျ့အလုပျအကိုငျတှတေ့ယျဆိုရငျ MyWorld က သငျနဲ့အလုပျအကိုငျအကွောငျး ဆှေးနှေးရနျဆကျသှယျပါတယျ။ ထိုအခါ သငျကစိတျဝငျစားတယျဆိုမှသာ ကုမ်ပဏီအမညျတှကေိုပွောပွပါတယျ။
၇။ သငျ့ကုမ်ပဏီက Job Vacancy အတှကျရော ကွျောငွာပေးလား။
ဟုတျကဲ့ ကွျောငွာပေးပါတယျ။ Client တှကေိုအကောငျးဆုံး Quality Recruitment Service ကိုပေးတဲ့ MyWorld Careers Company ကိုဆကျသှယျလိုပါက MyWorld ရုံးဖုနျး 094-5021-4921 နှငျ့ Email လိပျစာ sales@myworld.com.mm သို့ရုံးခြိနျဖွဈတဲ့ တနင်ျလာနမှေ့ သောကွာနေ့ မနကျ ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတှငျး ဆကျသှယျမေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါတယျရှငျ့။
If you are interested in applying foraposition, please send your resume to support@myworld.com.mm. You can directly apply for the job from the MyWorld website by going to the link from the Facebook post. You can also reach us at 094-5021-4921 for more information.
2. Do I have to payaservice fee to MyWorld asacandidate?
No, candidates do not need to pay us for our service. All service fees are charged to the company we represent.
3. Will MyWorld keep my CV confidential?
Yes. As we value our candidate's privacy, we always keep your CV confidential. Only whenamatching position comes up for you and only after you have given your permission toaMyWorld consultant, we share your CV with the respective company.
4. I have sent my CV but I do not hear anything from MyWorld. May I know why?
Please understand we get hundreds of applications each day and are only able to reply to candidates who are suitable for roles we are currently working on. We are spendingalot of time searching for new roles that might be suitable for you in the future, so please keep checking our site for new roles. Click here to read the details.
5. It would be great if you could advertise vacancies for my career.
Thank you for your feedback. Please visit our jobs page (www.myworld.com.mm/job-category-list) for similar jobs. If you still can't findasuitable position, you can either register on our website or send your CV directly to us (support@myworld.com.mm). Then we will be in touch with you through our consultants as soon asamatching position comes up.
6. Can you please let me know about the company of this position?
Thank you for your message. Unfortunately, we need to keep the details of the company confidential. After we have reviewed your background and if there isasuitable match, we will contact you and discuss the role in more detail. At that time, we will be able to reveal the name of the company.
7. Can you please shareajob vacancy announcement for my company?
Of course, we can. We areacareer consulting company and we provide quality recruitment services to all our clients. Could you please share your contact information so that we can call you to further discuss? If you are in urgent need, please contact the office during business hours on 094-5021-4921 or email us at sales@myworld.com.mm.
Product Developer at the most successful FMCG company in Yangon
Salary: Up to 1,500,000 MMK plus other allowances
Maintenance Manager at the most successful Construction Materials Production Company in Yangon
Salary: Up to 2,500,000 MMK plus other allowances
Technical Manager at International Construction and Media Company in Myanmar
Salary: Up to 2,000,000 MMK + Benefits
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အလုပ်ချိန်အဖြစ် ပြောင်းလဲကြပါစို့
23 days ago by MyWorld Support
Opportunities presenting themselves in Supply Chain and Logistics for Finance & Engineering Professionals
3 months ago by George Aung